Halaviro Paddleboard Lesson ao amin'ny Bolongo Bay Beach Resort
Mianara mitsangana paddleboard any Karaiba
Toeram-pijerem-peo eo amin'ny toeram-piompiana atody ao amin'ny Bay Bolongo ao St. Thomas
Mandeha miverina any amoron-dranomasina rehefa mitsangana eny amin'ny lakandranon'i Bolongo. © Bob Curley
Raha efa nahita olona iray mitaingina fiaramanidina fiaramanidina (SUP) any amin'ny renirano iray ao an-toerana ianao na amin'ny alàlan'ny boriborintany feno filaminana, dia mety ho ny mieritreritra ny hevitra voalohany: izany dia tsotra. Mieritreritra aho fa ny havany akaiky, nikaroka, dia izany. Na izany aza, na inona na inona fomba hikolokoloana anao, tsy mitsoka rivotra foana ny mijoro eo amin'ny sehatra iray eo amin'ny rano, satria mety ho voamarik'izay efa nipoitra tampoka.
Ary ny fanonganam-pandehanana dia kely lavitra noho ny dock iray. Na izany aza, amin'ny tany farafaharatsiny dia toa be dia be ny lanjany - ny salanisan'ny SUP anao dia 9 ka hatramin'ny 12 metatra ny lavany ary mihoatra ny 3 metatra ny sakany, ka mahatonga azy io ho toy ny lavaka nentin-drazana nentina nandehanana tany manodidina ny 10 metatra). Toy ny surfing, ny paddleboarding misy azy dia manana ny fakany any Hawaii.
Ny fitaovana lehibe hafa ilainao dia ny familiana, mazava ho azy, manitsy ny halavanao hiorenana mba ahafahanao manosika sy manodina ny solaitrao rehefa tafiditra ao anaty rano ianao. Farany, te hanamboatra fitaovana fitaterana manokana ianao (PFD), izay antsoina hoe jirama velona.
Mianara mitsangana Paddleboard: Feet wide, Ayes Forward
Ankizivavy mitaingina bisy any Bimini, Bahamas. © miamism amin'ny alàlan'ny Flickr
Ny ilana azy farany dia manjavona ahy rehefa niala tao Bolongo Bay Beach Resort tao St. Thomas , USVI aho noho ny fanandramako voalohany ny fiandrasana paddleboarding. Ny mpampianatra ahy, Dave Tracy sy Yoshi Tochiki, dia nanolotra torolàlana fohy nefa manan-danja, voalohany indrindra: mitazona ny vala miaraka amin'ny tanana roa, ny iray ambony ary ny iray amin'ny sambony, mba hahazoana ny tsara indrindra; ary mijoro eo afovoan 'ny solaitrao miaraka amin' ny elatrao ny elatrao, ary miaraka amin 'ny tongotra sy ny soroka. (Mazava ho azy, tsara ny manomboka mandohalika mandra-pahazoanao antoka ny hijoro.)
Toa tsotra izao, hoy aho amin'ny tenako. Ary raha ny marina dia manao tsara ny asako aho mametraka ny làlana ho any amin'ny toerana mahafinaritra, miadana miadana fa tsy miova. Tsy fanatanjahantena natsangana ho an'ny hafainganam-pandeha izany - ny tanjon'ny zen-tahaka dia ny tanjona. Mitsangana ianao, mazava ho azy, noho izany dia manana fomba fijery tsara ianao na aiza na aiza alehanao.
Izay mitondra mpihaino tsara iray hafa - mitandrema ny masonao ary ny masonareo izay alehanareo, maka fanahy na dia mijery ny tongotrao aza. "Ajanòny ny lohalinao, miposaka ny masonao, ary milelano toy ny tianao holazaina", hoy i Kendall Cornejo, izay mitantana ny lakandranon'ny rano ao amin'ny Cinnamon Bay eo akaikin'i St. John, izay ahafahanao manofa trano fialan-tsasatra ho an'ny $ 30 isan'ora na miditra Tondra-masoandro mandritra ny adiny roa isaky ny ora $ 40 (ao amin'ny Bay Bolongo, ny lesona sy ny fialan-tsasatra dia ampidirina amin'ny vidin'ny fonosana rehetra misy anao).
Tsy afaka miala sasatra loatra ianao, na izany aza. Satria vantany vao misy rambony vitsy - eny fa na dia ireo izay tsy mendrika akory aza ny antsoina hoe "onja" - dia ho tsapanao fa raha te hitoetra ho marina ianao, dia mila manao fanitsiana kely tsy dia lehibe loatra ianao eo amin'ny tongotrao ary indrindra ny fototrao. Ny fandefasana ny fiarandalamby, arakaraky ny hitanao manosika ny hozatry ny hozatra manerana ny vatanao ambany - hey, asa soa tsara izany!
Tsy azo ihodivirana aho, miondrika lavitra loatra ny onjan'ny onja, eny, ny onja tena izy. Niditra tao amin'ny tambajotra aho niondrika, tamim-boninahitra nialana tao amin'ny birao ary nitodi-doha hiverina tamin'ny tany tsy dia lavitra loatra ny fiarako. Ny fanavaozana ny birao dia mora, fa tsy mila famporisihana fanampiny avy amin'i Dave sy Yoshi aho mba hiverina hiverina any anaty rano mangina.
Paddleboarding: Hitsangana amin'ny andro voalohany ianao!
Mitsangàna miakatra ny onja lehibe. © Mike Baird tao amin'ny Flickr
Raha vao azonao ny fanangonana azy, dia misy fiaraha-mientanentana ny fanonganam-pitaovana. Azonao atao ny mamela ny moron-drivotry ny rano ary ento ao amin'ny tontolo tsara tarehy Karaiba manodidina anao, mijery any anaty rano mba hitsikilo trondro sy sokatra, ary haka eny an-dalamby vetivety aza ny tananao mba handefa ny sambo.
Tsy dia sarotra loatra ny famolavolana fianarana - 15 minitra lesona sy 15 minitra eo amin'ny rano dia tokony hahatsapa anao farafaharatsiny matoky anao any. Tsy toy ny traikefa maro nipoitra ny fiaramanidina, ianao dia tena azo antoka fa hijoro eo amin'ny solaitrabe ny andro voalohany, na izany aza dia fanatanjahan-tena izay ahafahanao mandroso amin'ny fanoherana ny onjam-pahagagana toy ny mpitaingina, izay miharihary fa mila fikarakarana bebe kokoa. Ho an'ny mpandray anjara, manampy amin'ny fananana fandanjana mendrika sy hery kely izy ity ... antony iray hafa ankoatry ny fananana vatana torapasika tsara hanaovana sit-in vitsivitsy mialohan'ny hidina any amin'ireo nosy!
Tsidiho ny Taridalana Bolongo Bay sy ny fitsidihana ao amin'ny TripAdvisor
Sokajin-teny momba ny rivo-doza 1 amin'ny 5
Nosy manokana ao Karaiba
Toby fitetezam-paritra any Karaiba
Fomba hifidianan'ny Nosy Karaiba ho an'ny fialan-tsasatrao
Miezaha miasa ary miantoka vola amin'ny Travel Travel
Ny New York City's Best Toy Store Adventures ho an'ny ankizy
Fetiben'ny Kadayawan - Davao City, Philippines
Fireworks amin'ny Orlando Theme Parks
Ireo Ziplines any an-danitra any Kalifornia dia manadino ny Farihy Tahoe
San Francisco tamin'ny volana novambra
Ny Top 10 Things to Do in Nouvelle Zélande
Toerana tsara indrindra any amin'ny faritra tandrefana
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fisaritahana amin'ny endrika
Sehatr'i Bayeux: ny Katedraly, ny Trano Antitra ary ny Ady Lehibe II
Ririnina any Londres: Valan-javaboary, Pubs ary Mofomamy